most viewed porn blog of Nepal
Hot & Sexy Nepali Actress Rekha Thapa
Namrata Sex Scandal,Top Nepali Actress Full Version
Nepali Nude Web Cam Girl Muna Shrestha
Neplai Sex Jokes
Looking Cute To U......
धेरै साथीहरुले अनुरोध गरेकोले गर्दा नम्रता श्रेष्ठको फुल भर्सनको एउटै भिडियो फाइल बनाएर अपलोड गरिएको छ ।
Download this video. Click here.
.. 16 comments
नेपाली केटी मुना श्रेष्ठको भनेर पाइएको यो भिडियोमा मुनाले वेबक्याममा लुगा खोलेर देखाएकी छिन्, सेक्सी हर्कत देखाएकी छिन् । अन्दाज लगाउन सकिन्छ, शायद आफ्नो ब्वाइफ्रेन्डको लागि होला । जे होस् खुलेर देखएकी छिन्, आफ्नो सेक्सी जिउडाल ।
..6comments
नेपाली छाडा जोक्स् - चिकुवा जोक्स्
मुन्द्रे : ल मामा भन्नुस यस्तो कुन चिज छ जसको ४ वटा खुट्टा छ अनि एकदम छिटो दौडिन्छ ।
राता मकै : ए राता मकै यति जावो पनि जान्दिन होला त म । कार त हो नि ।
मुन्द्रे : गलत जवाफ, मर्सिडिज कार ।
ल अब अर्को प्रश्न , जसको २ वटा खुट्टा छ अनि एकदम छिटो दौडिन्छ राता मकै : मोटर र्साईकल मुन्द्रे : फेरी गलत जवाफ, करीश्मा मोटरर्साईकल ।
राता मकै : झोक्किंदै ए राता मकै यस्तो पनि कहिं प्रश्न हुन्छ ल अब मेरो सोध्ने पालो , यता कपाल उता कपाल विचमा प्वाल त्यै प्वालभित्र स्वात्तै पसाल के हो ?
मुन्द्रे : यति पनि थाहा छैन होला त, पुति त हो नि ।
राता मकै : गलत जवाफ, पुति होईन, रेखा थापाको पुति हो ।
छोराले हस्तमैथुन गरिरहेको बेलामा रंगेहात फेला पारेपछि बाउले छोराको विहे गरिदिएछ । विहेको भोलिपल्ट छोरासँग बाबु : अब त सब ठिक छ होला नि ? छोरा : खाग ठिक हुनु नि पाँच मिनेट पनि नहुँदै उसको हात गलिसक्दो रैछ ।
एक युवती प्लाष्टिक सजर्नसँग : युवती : डाक्टरसाब मेरो पुतीनेर अर्को प्वाल थप्नु पर्‍यो डाक्टर : (छक्क पर्दै) किननि ? युवती : धन्दा एकदम राम्रो चल्दैछ । त्यसैले नि ।
श्रीमान : बिहेपछि त जीन्दगी कुकुरको जस्तो भैराछ । श्रीमती : के को कुकुरको जस्तो हुनु नि कुकुरभन्दा पनि विजोग भने सुहाउँछ । श्रीमान : किननी ? श्रीमती : अब कुकुरले १ घण्टासम्म नन्स्टप चिक्छ तिमि भने एक मिनेट पनि तग्न सक्दैनौ ।
श्रीमान : ओई रण्डी मलाई त निन्द्रा नै लागेन खोई पुति थाप त एकपटक फेरी चिकौं । श्रीमती : मुर्दार मेरो पुतिभित्र तेरी आमाले निदरीको गीत गाइछ र चिकेसी निन्द्रा लाग्ने ? ———********——
शिक्षिका : यस्तो चिजको नाम भन जुन तिमि देख्न सक्छौ तर छुन सक्दैनौ विद्यार्थी : मिस तपाईको वुवु ।
श्रीमान श्रीमती राति चिकिराखेको बेलामा छोरा विउँझिन्छ । छोराले आफ्नो बाबु आमाको चर्तिकला देखेर सरासर बाथरुममा गएर हस्तमैथुन गर्न थाल्छ । यो देखेर बाउले छोरोलाई सोध्छ : ओई गधा केगर्दैछस् हँ ?
एकपटक प्रकाश पौडेल पिसावले च्यापेर हतार हतारमा ट्वाईलेट पसेछ र तर दुर्भाग्यवश त्यो त लेडिज ट्वाईलेट पो परेछ । यत्तिकैमा त्यही ट्वाईलेटमा पिसाव फेर्दै गरेकी पुजना प्रधान बेस्सरी चिच्याईछन् : मुर्दार यो केटीहरुको लागि हो भन्ने थाहा छैन ?
------------ ******* -------------
हतारका कारण कम्पनी मालिक आफ्नो प्यान्टको फस्नर लगाउन विर्सेर यत्तिकैमा अफिस पुगेछन् । सेक्रेटरी : (नजिकै पुगेर सुटुक्क) सर आज अफिस आउने बेलामा ग्यारेजको ढोका लगाए नलगाएको राम्ररी चेक गर्नुभो त आफ्नो सेक्रेटरीको कुरा बुझन नसकी मालिक अचम्मीत हूदै आफ्नो अफिस भित्र छिरेछन् । केही समय काम गर्दै गर्ने क्रममा उसले आफ्नो फस्नर खुला रहेको देखेछन् र हतारमा फस्नर लगाएछन् । अनि बल्ल सेक्रेटरीले भनेको कुरा बुझेर चिया माग्ने निहुँले सेक्रेटरीकोमा गएछन् र सोधेछन्
.. 14 comments
White Water From Ur Vagina: Treatment
स्त्री रोग र समाधानका उपायहरु :योनिबाट बग्ने पिप जस्तो चिप्लोपानी
सबै स्त्रीहरुमा थोरै मात्रामा सेतो, सफा अलि-अलि पहेंलो तरल पदार्थ बग्नु सामान्य हुन्छ। चिलाउने र दुर्गन्ध हुने नभए यसमा कुनै समस्या हुँदैन। तर धेरै स्त्रीहरुमा विशेष गरी गर्भवती अवस्थामा योनीबाट तरल पदार्थ बग्नुका साथै चिलाउँछ। यो स्राव अनेक थरीको संक्रमले गर्दा हुनसक्छ। यसले प्राय झंझट पैदा गर्छ तापनि खतरापूर्ण भने हुँदैन।
पातलो फिंज भएको हरियो, पहेंलो वा सेतो दुर्गन्धित स्राव र योनिचिलाउने समस्या प्राय: ट्राइकोमोनासको संक्रमणले हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा पिसाब फेर्दा पोल्छ। कहिलेकही जननेन्द्रियमा दुख्छ वा सुनिन्छ।
जननेन्द्रिय सधै सफा राख्‍नु आवश्यक हुन्छ।
मनतातो पानीमा भिनिगर मिसाएर योनिलाई सफा राखेमा अथवा डुस दिएमा फाइदा गर्छ।एक लिटर उम्लेको पानीमा तिन चम्चा भिनिगर राख्‍नु पर्छ स्त्रीले निको नहुन्जेल दिनको एक देखि तिन पटकसम्म योनि सफा राख्‍नुपर्छ। अथवा डुस दिनु पर्छ। भिनिगर छैन भने कागतीको रस पानीमा राखी प्रयोग गर्नु हुन्छ।
कडा अवस्थामा ट्राइकोमोनासका लागि मिट्रानिडाजोल वा योनिभित्र राख्‍ने अन्य औषधि प्रयोग गर्नुपर्छ। ज्यादै कडा रोगमा मेट्रानिडाजोलको २०० मि ग्रा को चक्‍की दिनको ३ पटकका दरले १० दिनसम्म लिनुपर्छ।
यो ट्राइकोमोनास रोग भएकी स्त्रीले श्रीमानलाई थाहै नभई संक्रमण भएको हुन सक्छ। (कुनै पुरुषलाई ट्राइकोमोनास संक्रमणमा पिसाब फेर्दा पोल्छ) यदि कुनै स्त्रीलाई उपचार गरे पछि पनि फेरी संक्रमण भयो भने दुबै (श्रीमती, श्रीमान् ) ले एउटै उपचार एउटै दिन सुरु गर्नुपर्छ। संक्रमण कडा भएमा मात्र मेट्रोनिडाइजोल चक्‍की खानुपर्छ।सम्भोग गर्दा पुरुषले कन्डमको प्रयोग गर्नुपर्छ।
सेतो स्राव जो चिज वा नौनी जस्तो देखिन्छ र ढुसीको जस्तो दुर्गन्ध आउँछ।
यो यिस्टको संक्रमणले हुन सक्छ।यसमा एकदमै चिलाउँछ। योनिको ओठ राता देखिन्छन् र त्यहाँ पीडा हुन्छ। पिसाब फेर्दा पोल्छ। यो विशेष गरी गर्भिणी आइमाई, बिरामी, मधुमेह भएका वा प्रतिजैविकी लिइरहेका वा परिवार नियोजनको चक्‍की खाइरहेकाहरुमा हुन्छ।
मधुमेहका लागि पिसाब जाँच्नु पर्छ। भिनिगर पानी वा जेन्सन भायोलेट (२ चम्चा जेन्सन भायोलेट आधा लिटर उमालेको पानीमा मिसाउने) डुस लिन पर्छ। निष्ट्‍याटिन अथवा योनिभित्र राख्‍ने अन्य चक्‍कीहरु प्रयोग गर्नुपर्छ। यिस्ट संक्रमणको नियन्त्रणमा योनिभित्र दही राख्‍ने घरेलु उपचार उपयोगी भएको छ।
यस्तो संक्रमण विरुद्ध प्रतिजैविकीको प्रयोग कदापि गर्नु हुँदैन।
४ बाक्लो सेतो दूध जस्तो र अमिलो गन्ध आउने स्राव। यो हिमोफिलम नामक जीवाणूको संक्रमणबाट हुनसक्छ। विशेष जाँचद्वारा यसलाई ट्राइकोमोनासबाट छुट्‍याउनु पर्ने हुन्छ। योनिमा भिनिगर पानीको डुस दिनुपर्छ। योनिभित्र राख्‍ने सल्फा थायोजलको चक्‍की २ पटक दुई हप्तासम्म राख्‍नुपर्छ।
५ पानी जस्तो खैरो रगत मिसिएको दुर्गन्धित स्राव हुनु झन कडा संक्रमण अथवा संभवत: क्यान्सरको चिन्ह पनि हुन सक्छ। ज्वरो भएमा प्रतिजैविकी प्रयोग गर्नुपर्छ। (सके एम्पिसिलिन) । तुरुन्त चिकित्सकको मदत लिनुपर्छ।
यदि धेरै लामो अवधिसम्म पानी बहिरह्यो वा उपचारले सञ्‍चो भएन भने स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई भेट्नुपर्छ।
संक्रमणबाट महिलाले कसरी बच्ने ?
जननेन्द्रिय छेउछाउमा सफा राख्‍नुपर्छ। नुहाउँदा साबुनले राम्ररी सफा गर्नुपर्छ।
सम्भोग पछि पिसाब फेर्नुपर्छ। यसो गर्दा मूत्र प्रणालीको संक्रमणबाट बचिन्छ। तर गर्भाधान भने रोकिदैन।
दिसा गरेपछि राम्ररी धोएर सफा गर्नुपर्छ।
तल्लो पेट दुख्‍ने संभाव्य कारण हुन्
तल्लो पेट दुख्‍नुका विभिन्‍न कारणहरु हुन्छन्। त्यस्ता कारणहरुको वर्णन किताबका विभिन्‍न भागमा गरिएको छ। प्रश्‍न सहितको तलको तालिकाले किताबको कुन पृष्ठमा के हेर्ने सो थाहा हुनेछ।
महिनावारीको बेला हुने दुखाइ के महिनावारी हुँदा वा महिनावारी हुनु अघि धेरै दुख्छ?
मूत्राशयमा संक्रमण हुँदा तल्लो पेट दुख्‍नु यसको सामान्य कारण हो। के पिसाब छिनछिनमा हुने वा दुख्‍ने गर्छ?
ट्रकोमोनास या यिष्ट संक्रमण यस्तो संक्रमण कहिलेकही पाठेघरबाट डिम्बनली भएर डिम्बाशयमा समेत पुग्न सक्छ। के योनिबाट पानी बग्छ? बग्छ भने यो कस्तो हुन्छ?
पेल्भिसमा शोथ प्रायश: यो संक्रमणको अन्तिम चरणमा हुन्छ। यसमा उदरावरण शोथ वा अन्त्रपुच्छ शोथका लक्षणहरुका समान तीव्र रुपमा वा दीर्घ रुपमा लगातार वा बेला-बेला तल्लो पेटमा दुखाइ वा असजिलो हुन्छ र बेलाबखत यसमा ज्वरो र कम्पन समेत हुन सक्छ।
तल्लो पेटमा हुने मासु वा अरु कुनै डल्लोसँग सम्बन्धित समस्याहरुको वर्णन संक्षेपमा पृष्ठ २३२ मा गरिएको छ र यस अन्तर्गत डिम्बाशयको सिष्ट वा बाह्य गर्भधारण (पाठेघर बाहिर भ्रूणको विकास) र क्यान्सर पर्दछन्।
आन्द्रा अथवा मलाशयमा संक्रमण हुनु वा कुनै अन्य समस्या; केही दुखाइको सम्बन्ध खाँदा वा दिसा बस्ता सँग रहेको हुन्छ?
यी माथि लेखिएका केही समस्याहरु गभीर होइनन् र कुनै खतरापूर्ण पनि हुन्छन् तिनीहरुलाई सधै छुट्‍याउन सजिलो छैन। विशेष जाँच अथवा परीक्षणो आवश्यकता पर्न स्छ।
यदि दुखाइको कारण थाहा नभए वा छिट्टै सञ्‍चो नभए चिकित्सा मदत लिनुपरछ।
धेरै जसो केटीहरु ११ देखि १६ वर्षको बीचमा पहिलो पटक महिनाबारी हुन्छ। यसको अर्थ उनीहरु अब गर्भवती हुन सक्छन् भन्‍ने हुन्छ।
साधारणतया: महिनावारी प्रत्येक २८ वा सो दिनपछि हुन्छ र ३ देखि ६ दिससम्म रहन्छ। तापनि विभिन्‍न स्वास्नी मानिसहरुमा केही भिन्‍नता वा घटीबढी पनि हुन सक्छ।
महिनावारी ठीक समयमा नहुने वा महिनावारीको समयमा दुख्‍ने प्राय: तरुनीहरुमा हुन्छ। तर यसले केही कराब गर्दैन।
यदि महिनावारी हुँदा दुख्छ भने महिनावारी हुँदा महिलाले ओछ्यानमा सुतिरहने आवश्यकता छैन वास्तवमा सुतेमा बढी दुख्छ।
अलिक हल्का काम वा व्यायाम गरेमा फाइदा हुनसक्छ।
अथवा तातो तरल पदार्थ पिउने गर्नाले वा खुट्टा तातो पानीमा डुबाइराख्‍नाले पनि फाइदा हुनसक्छ।
दुखाइ कम गर्ने (बरालगन) चक्‍की खाएमा वा पेटमा तातो सेक दिएमा पनि फाइदा हुन्छ। यस अवस्थामा स्वास्नी मानिसहरुले आफूलाई सफा राख्‍नुपर्छ, आराम गर्नुपर्छ र सन्तुलित भोजन खाने गर्नुपर्छ। सधै खाए जस्तै खाना खाए हुन्छ र गरिरहने काम गरे पनि हुन्छ। महिनावारी हुँदा सम्भोग गर्नाले केही बेफाइदा हुँदैन। तर नगर्नु राम्रो हो। प्याड लगाउने भए प्रत्येक दिन बदल्नु पर्छ। यदि कपडा प्रयोग गरेमा त्यो सधै धोएर बदल्नु पर्छ।
महिनावारीका खराब लक्षणहरु
केही स्वास्नी मानिसहरुमा महिनावारी ठीक ठीक समयमा नहुनु सामान्य भए पनि धेरै जसोलाई यो दीर्घरोग, रक्त अल्पता, कुपोषण वा पाठेघरमा संक्रमण भएको कारणले हुन सक्छ।
हुनुपर्ने समयमा महिनावारी नभएमा गर्भधारण भएको हुनसक्छ। तर भर्खरै महिनावारी सुरु भएका केटीहरु तथा ४० वर्ष नाघेका स्वास्नीमानिसहरुमा महिनावारी छुट्‍नु वा गडबडी हुनु सामान्य हुनसक्छ। चिन्ताले पनि महिनावारी रोकिन सक्छ।
यदि गर्भवती अवस्थामा रगत बग्यो भने यो गर्भपतनको लक्षण हुनसक्छ।
यदि महिनावारीको लक्षण ६ दिनभन्दा बढी रह्यो वा एकदमै बढी रगत बग्यो भने वा एक महिनामा एक पटक भन्दा बढी भयो भने चिकित्सकको मदत लिनुपर्छ।
महिनावारी सुक्ने (मेनोपज)
महिनावारी हुन सदाको लागि बन्द हुने अवस्थालाई मेनोपज भनिन्छ। यसपछि महिला कहिल्यै गर्भवती हुन सक्तिनन्। साधारणत - यो अवस्था ४० देखि ५० वर्षको बीचमा हुनसक्छ। धेरै महिनासम्म महिनावारीमा गडबडी भएर पछि स्वत: स्थगित हुन्छ।
मेनोपज हुँदा सामान्यत: स्वास्नीमानिसहरुलाई धेरै कष्ट हुन सक्छ, जस्तै: ताप, चिन्ता, शरीरभरि दुखाइ, उदासीपना, खिन्‍नता आदि। मेनोपज पछि धेरै जसोलाई फेरि सञ्‍चो हुँदै आउँछ। मेनोपज हुँदा यदि धेरै रगत बग्यो वा पेट निकै दुख्‍यो भने वा महिनावारी रोकिएर फेरि सुरु भयो भने चिकित्सकको मदत लिनुपर्छ। क्यान्सर वा अरु रोगहरुमा पनि यसो हुन सक्छ।
विभिन्‍न थरीका स्तनका गिर्खाहरु
दूध चुसाउने आमाको स्तनमा दुख्‍ने तातो गिर्खा हुन सक्छ र नदुख्‍ने भए क्यान्सर हुन सक्तछ।
यस्तै क्यान्सर प्राय: स्वास्नीमानिसहरुमा हुन्छ र सधै खतरापूर्ण हुन्छ। यसको सफा उपचारको लागि क्यान्सरको चिकित्सकको मदत लिनुपर्छ। प्राय: शल्य चिकित्साको आवश्यकता पर्छ।
स्वास्नीमानिसहरुले स्तनको कुनै भागमा नदुख्‍ने गिर्खा भएको महसुस गर्छन्।
स्तनमा असाधारण किसिमको खोपिल्टो वा सुन्तलाको बोक्राको जस्ता साना प्वाल हुन्छन्।
काखीमुनि प्राय: नदुख्‍ने गिर्खाहरु हुन्छन्।
स्तनका गिर्खा बिस्तारै बढ्दै जान्छन्।
सुरुमा नदुख्‍ने र पछि दुख्‍ने अवस्था हुन सक्छ।
स्तनको जाँच कसरी गर्ने?
क्यान्सरका लक्षणहरु छन् कि भनेर जान्‍न प्रत्येक स्वास्नीमानिसले आफ्नो स्तन आफैजाँच्न सिक्नुपर्छ। प्रत्येक महिना ऐनाको अघि बसी
आफ्नो स्तन राम्ररी नियालेर स्तनमा केही भिन्‍नता छ छैन? भनेर हेर्नुपर्छ।
पिठ्‍यूमुनि तकिया राखेर आफ्नो स्तन आप्नो औलाले छाम्नुपर्छ; यसरी
स्तनलाई थिचेर औंला बीच घुमाउनुपर्छ। मुन्टादेखि सुरु गरेर स्तनको वरिपरि र अन्तमा काखिमुनि छाम्नुपर्छ।
मुन्टालाई निचोरेर रगत वा अरु केही चीज बाहिर निस्कन्छ कि हेर्नुपर्छ।
यदि कुनै गिर्खा वा अरु कुनै असाधारण लक्षणहरु भेट्टाएमा चिकित्सकको सल्लाह लिनुपर्छ । धेरै गिर्खाहरु भएमा क्यान्सर नभए पनि होइन रहेछ भन्‍ने कुरा छिट्टै थाहा पाउनु जरुरी हुन्छ।
पेटको तल्लो भागमा गिर्खा वा डल्ला
पेटको तल्लो भागमा गिर्खा देखिनुले पेटभित्रको बालकमा अरु केही असामान्य कारणहरु भएको जनाउँछ।
डिम्बाशयमा पानी भरिएर सुनिनु।
गर्भे बालक पाठेघरदेखि बाहिर हुनु।
यी तीनै अवस्थाहरुमा सुरुमा दुखाइ हुँदैन। तर पनि दुख्‍छ। सबैमा चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ।
प्राय: यो ४० वर्षदेखि बढीका स्वास्नीहरुमा हुन्छ। पहिलो लक्षण-रक्तअल्पता वा अचानक योनिबाट रक्तस्राव हुनु। यसबाट पछि गएर पेटमा दुख्‍ने गिर्खा हुन्छ।
क्यान्सरको पहिलो शङकाका नै चिकित्सा मदत लिनुपर्छ। घरेलु औषधिहरुले केही फाइदा हुँदैन।
कहिलेकही बालक पाठेघर देखि बाहिर डिम्बाशयबाट आउने नलीमा बढ्न थाल्छ। असाधारण महिनावारीको साथ गर्भधारणका लक्षणहरु हुन सक्छन्। साथै पेट दुख्‍न सक्छ। पाठेघरदेखि बाहिर कुनै पनि बालक बाँच्न सक्तैन। बेस्थिति गर्भधारणको उपचार अस्पतालमा हुन्छ। यस्तो अवस्थाको शङ्‍का भएमा तुरुन्त चिकित्सकको
मदत लिनुपर्छ । किनभने खतरापूर्ण तरिकाले रक्तस्राव जुनसुकै बेलामा पनि सुरु हुन सक्छ।
गर्भपतन बालक नजन्मिईकन पाठेघरभित्र नै मर्छ। प्राय: यो गर्भावस्ताको पहिलो ३ महिनामा हुन्छ। धेरै जसो बालक कुरुप हुन्छन्। धेरै जसो स्वास्नी मानिसहरुमा एक दुई पटक गर्भपतन भएको हुन्छ। धेरै जसोले गर्भपतन भएको थाहा नपाई महिनावारी ढिलो ढिलो भएको वा त्यसै नाघेको अनुभव गर्छन्। गर्भपतन भएकी स्वास्नीमानिसलाई थाहा हुनुपर्छ। कारण यो खतरापूर्ण हुन्छ। एउटा वा बढी महिनावारी नाघेर अत्याधिक रक्तस्राव प्राय: गर्भपतनको कारण नै हुन्छ। गर्भपतनमा भ्रुण र साल दुबै बाहिर निस्कनु पर्छ। पूरा ननिस्केसम्म रक्तस्राव भइरहन्छ।
गर्भपतनका अवस्थामा भ्रुण १ देखि २ से मि भन्दा सानो हुन सक्छ।
यदि अत्यधिक रक्तस्राव नभए केही समस्या हुँदैन। यस्तो अवस्थाना ओछ्‌यानमा सुतेर आराम गर्ने र सुत्केरीको जस्तै हेरविचार गर्ने।
यदि अत्यधिक रक्तस्राव भएमा वा धेरै दिनसम्म रक्तस्राव भइरहेमा:
चिकित्सकको मदत लिनुपर्छ । अप्रेसनको जरुरी पर्न सक्छ (डि एन्ड सि)
रक्तस्राव नथामिएसम्म ओछयानमा रहनुपर्छ।
अत्यधिक रक्तस्राव भएममा लेखिए बमोजिम गर्नुपर्छ।
यदि ज्वरो वा अरु संक्रमणका लक्षणहरु देखा परेमा सुत्केरीमा हुने संक्रमणमा जस्तै उपचार 
Sex Education: Masturbation
यौन शिक्षा : हस्तमैथुनका फाइदा
प्रश्न : म २४ वषर्ीया अविवाहित युवती हुँ । केही महिनाअघि प्रेमीसंग सुरक्षित यौन सम्पर्क भएको थियो । हाल उहाँ केही समयका लागि नेपालबाहिर जानुभएको छ । विगत केही महिनादेखि ममा यौन इच्छा एकदमै बढी हुने गर्छ र हस्तमैथुन पनि गर्ने गर्छु । हस्तमैथुन गर्दा आफ्नो बीचको औंला डेढ इन्च जति पसाएर घर्षण गर्ने गर्छु । प्रत्येक दुई तीन दिनको फरकमा यस्तो गर्ने गर्छु हस्तमैथुन गर्दा आनन्द त मिल्छ तर यसले हाम्रो (म र मेरो प्रेमी) भविष्यमा केही असर गर्छ कि ? के हस्तमैथुन गर्दापछि सन्तान प्राप्तिमा असर पर्छ ? सायद तीन महिनाभित्र मेरो विवाह मेरो प्रेमीसँगै हुँदै छ, के अहिले मैले यसरी हस्तमैथुन गर्दा योनी प्वाल ठूलो हुन्छ ?
- के थापा
उत्तरः महिला हस्तमैथुन भगक्षेत्र अर्थात् महिलाको यौनाङ्ग क्षेत्रमा हुने सायद यो नि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यौन अङ्ग भगाङ्कुर हो । यो भगक्षेत्रको माथिल्लो भागतिर स्थित हुन्छ जहाँनिर भगोष्ठ दुवैतिरबाट एक आपसमा जोडिन्छन् । यही भगक्षेत्रमा दुईवटा द्वार (प्वाल) हरू हुन्छन् र त्यसमध्ये पिसाब आउनेलाई मूत्रद्वार भनिन्छ त्यसको मुनितिरको अर्कोलाई योनिद्वार भनिन्छ । योनिद्वार भगक्षेत्रको बीचतिर हुन्छ । योनिद्वार योनिको बाहिरतिरको भाग हो । योनि मांसपेशीले बनेको एक एकदमै लचिलो नली आकारको अङ्ग हो । योनिद्वार नजिकै एकदमै पातलो छालाको झिल्ली हुन्छ जसलाई योनिच्छद भनिन्छ । यौन चाहना स्वाभाविक कुरा हो र यसलाई शान्त पार्न यौन सम्पर्क नै गर्नुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा छ । तर यौन सम्पर्क गर्न नपाइएको स्थितिमा हस्तमैथुन एक राम्रो विकल्प हो । खुला रूपमा भने पनि नभने पनि धेरैजसोले हस्तमैथुन गर्ने गर्छन् र यो स्वाभाविक कुरा हो । आफ्ना यौन अङ्ग आफंैले चलाएर यौन आनन्द प्राप्त गर्ने क्रियाकलापलाई नै हस्तमैथुन भनिन्छ । महिलाले हस्तमैथुन गर्दैनन् भन्ने सोचाइ पनि कतिजनाको रहेको पाइन्छ तर कुरा त्यसो होइन । यसका अनेक फाइदा छन् । हस्तमैथुनले यौन अङ्ग विशेषलाई राम्ररी नियालेर हेर्ने, अङ्ग प्रत्यङ्गलाई जान्ने अवसर दिनुका साथै आफैंलाई आनन्द दिने कार्यमा सहयोग गर्ने मात्र होइन मौकामा यौनजोडीलाई पनि यौन सुख प्रदान कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिकाउन पनि मद्दत गर्छ । हस्तमैथुन गर्दा अर्को व्यक्तिसँग यौन सम्पर्क नहुने भएपछि एचआईभीलगायतका यौन रोगबाट बच्न सकिने त भयो नै, अन्य व्यक्तिसँगको सम्बन्धले ल्याउने जटिलता वा समस्याबाट पनि बच्न सकिने भयो । आफैंले गर्न सकिने भएको हुनाले आफ्नो चाहनाअनुसार पायक पर्ने समयमा गर्न सकिने भयो । सर्वप्रथम त हस्तमैथुनले यौनइच्छाको दमनबाट हुने तनावबाट मुक्ति दिलाउँछ । तनावबाट मुक्त मान्छे बढी सकारात्मक रूपमा सिर्जनशील हुन सक्छ । यसरी यौन चाहना शान्त पार्न मद्दत पुर्‍याउने भएकाले कतिपय यौन अपराधलाई कम गर्न सहयोग पुग्छ भन्नेहरू पनि थुप्रै छन् । यस्तै हस्तमैथुनले अनावश्यक गर्भधारण, अन्य व्यक्तिसँगको यौन सम्बन्ध, यस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुने धन तथा समयको दुरुपयोगबाट पनि बचाउँछ । हस्तमैथुनले हानि गर्ला वा सन्तान प्राप्तिमा नकारात्मक असर पार्ला कि भनेर अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु पर्दैन । माथिको कुराले वास्तवमा सम्बन्धमा नकारात्मक असर पार्ने कुरालाई न्यून नै गर्छ भन्ने कुरा बुझ्नु नै भयो होला । अर्को पक्ष के भने योनिमा प्रवेश गराउँदा योनिच्छद च्यातिन सक्छ, यो विषय नै अर्को भयो । कतिपय व्यक्तिले योनिच्छदलाई कुमारित्वसँग जोड्छन् जुन वास्तवमा सत्य होइन । यसबारै पढ्नुभएकै होला । के औंला पसाउँदा योनिको प्वाल ठूलो हुन्छ ? पक्कै नै हाम्रा अन्य अङ्गहरूको नाप फरक भएजस्तै योनिको सामान्य अवस्थाको नापमा पनि केही विविधता हुने नै भयो । योनिको सालाखाला लम्बाइको कुरा गर्ने हो भने लम्बाइ यस्तै ३ इन्चको हुन्छ । यौन उत्तेजनाको बेलामा यसको लम्बाइ केही बढ्न जान्छ र ४ इन्चसम्म पनि पुग्न सक्छ र योनिद्वार पनि केही खुल्न जान्छ । नली आकारको अङ्ग भए पनि यसले पाइपको जस्तो जतिखेर पनि प्वाल वा खाली ठाउँ रहेको स्थिति भने हुँदैन । सामान्य अवस्थाको कुरा गर्दा यसको भित्ताहरू एक अर्कासँग टाँसिएका हुन्छन् । योनि मांसपेशीले बनेको नली आकारको एक विशेष अंग हो र यस अङ्गमा निकै नै तन्कन र खुम्चन सक्ने गुण हुन्छ । तन्कन र खुम्चन सक्ने गुण भएकै कारण विभिन नापको लिङ्ग योनिमा प्रवेश गर्दा मिल्ने स्थिति रहन्छ । योनिमा कुनै कुरा -औंला होस् वा लिङ्ग वा अरू कुनै वस्तु ) प्रवेश गराइएमा वरिपरिबाट योनिको भित्ता सो कुरामा टाँसिएको अवस्थामा नै हुन्छ । वस्तुअनुसार नै यसको गोलाइमा परिवर्तन हुन्छ । कुरा बुझ्न सजिलो होस् भनेर एकपल्ट ओंठ -मुख) सँग दाँजौं । सामान्य अवस्थामा माथि र तलतिर गरेर ओठको निश्चित सालाखाला नाप हुने गर्छ । तर यसको अर्थ यो होइन कि अलिकति सानो वा ठूलो भयो भन्दैमा ओठले समात्नै वा च्याप्ने नसक्ने त होइन । ओठले काँटी वा सियोजस्तो पातलो कुरालाई पनि समाउन सक्छ र केही मोटो जस्तै कि केरा वा पाइपजस्ता कुरालाई पनि । योनिमा पनि यस्तै हुने भएकाले पातलो र मोटो कुरालाई ओठले समाउन सक्छ भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ । एकछिन विचार गर्नुहोस् त, कुनै ठूलो आकारको कुरा मुखमा हालियो भन्दैमा त्यो सधैं खुकुलो भएर सानो कुरा च्याप्नै नसक्ने गरेर खुकुुलो हुन्छ र ? पक्कै नै हुादैन । योनि कसिलो बनाउन चाहने हो भने योनिको मांसपेशीलाई कडा बनाइराख्न केगेल कसरत एक राम्रो उपाय हो । केगेल कसरत हामीले पिसाब फेर्दा रोक्नलाई प्रयोग गर्ने मांसपेशीको कसरत हो । मांसपेशीको संकुचन गरेर पिसाब रोक्ने प्रयास गर्ने र यो प्रक्रिया दोहर्‍याउने, तेहर्‍याउने गरेर कसरत गरिन्छ । पछि यो मांशपोशी बलियो भए पछि यसलाई संकुचित गरेर यौन सम्पर्कको बेलामा तपाईंको पे्रमी वा भनौं हुनेवाला श्रीमान्को लिङ्गलाई बेस्सरी समात्न प्रयोग गर्न सकिन्छ र दुवैलाई यौन सुख प्राप्ति गर्न मद्दत मिल्छ । महिलाले कसरी हस्तमैथुन गर्छन् ? पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूले कम हस्तमैथुन गर्ने भए पनि उनीहरूले हस्तमैथुन गर्ने तरिकामा विविधता भने बढी हुने गर्छ । भगाङ्कुर चलाउनु वा घर्षण गर्नु हस्तमैथुनको एक प्रमुख तरिका हो । आफूलाई सजिलो लाग्ने वा मन पर्ने कुरा वा तरिकाले यसलाई चलाउन सकिन्छ वा यसलाई कुनै वस्तुमाथि थिच्नेजस्ता अनेक उपाय गर्न सक्नुहुन्छ । त्यसैगरी अर्को प्रमुख तरिका योनिमा केही पसाउनु हो । यसो गर्दा योनिमा पर्याप्त मात्रामा रस आइसकेको हुनुपर्छ र यौन उत्तेजना हुँदा यो स्वाभाविक रूपमा नै हुने गर्छ । औंला नै भए पनि यस्तो पसाउने कुरा सफा भएको कुरा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । औंला पसाउँदा आफूंलाई आनन्द पाउने स्थान योनिमा खोज्न सकिन्छ ।
एक दिन गिरिजा , प्रचण्ड , माधव कुमार, र बाबु राम चिक्न भनी रन्डी कोठीमा गएछ | तेह एउटा मात्रै रन्डी थियो , मुजी प्रचनदे भन्न थाल्यो , ” माने म जंगलको राजा १२ वर्ष मुजी आन्दोलन गरेर आये त मुजी पहिला चिकनी ? म चिकछु पहिला ” भनेर चिक्न गए छ र ५ minutes पछि सिथिल भएर फर्के छ | पछि बाबुराम गे छ यो पनि ७ minutes पछि फर्के छ | यो देखेर माधव कुमार ले भनेछ ” थूक मुजी जंगलका बोकाहरु ल अब्बा मलाई हेर भनेर त्यो पनि चिक्न गएछ माधव कुमार पनि १० minutes पछि फर्केर आयो | यो देखेर गिरिजाले भने छ “त हरु मुजी जवान छु भन्दै हेरो बन्दैथिस एकै छिनमा फर्केर आयो , अब मा जान्छु” भनेर गयो , गिरिजा मुजी बुदो १ मिनुते मा नै फर्किन्छ भनेर सोचे को थियो तिनी हरु तर १ घण्टामा पनि फर्केन , २ घण्टा बित्यो तै पनि फर्केन के भैराछ भनेर तिनै जना भित्र हेरी को त गिरिजा लादो हेर्दै कराउदै थियो ” ए भाइ उठ न भनेको ” |
Girl's Pusy Tight
केटा केटीलाई लिएर बेडमा सुतिरहेको थियो र आफ्नो औंलाहरु उसको पुतिको वरीपरी घुमाउदै थियो। केटीले भनी: औंलालाई भित्र छिराउ। उसले त्यसै गर्‍यो। केहीबेरमा फेरी उसले भनी अब दुईवटै औंला छिराउ। उसले फेरी आफ्नो दुई औंलाहरु छिरायो। फेरी केटी बोली: “अब पुरै हात छिराउ।” केटाले पनि उसले भने जस्तै गर्‍यो। फेरी केटीले भनी: “अब दुबै हात छिराउ।” केटाले आफ्ना दुबै हात भित्र छिरायो।
पुन: केटी बोली: ल अब ताली बजाउ।
केटी: देख्यो? मैले त भनेकी थिए नि मेरो पुती टाइट छ भनेर।
Nepali Bhabi Boob's Stories
सन्तोषी श्रेष्ठ ( भाउजु) सङ्गको त्यो पल ….।
..9comments
Jokes on Dr.
यौन चिकित्सकसँग बिरामी : डाक्टर साब मेरो लिङ्ग उठ्दै उठ्दैन।
डाक्टर : प्रेमीका छ?
बिरामी : छैन।
डाक्टर : रण्डीबाजी गर्र्छौ?
बिरामी : नाई गर्दिन।
डाक्टर : हस्तमैथुन गर्र्छौ?
डाक्टर : उसोभए लिङ्ग उठाएर के कपडा टाँग्छौ?
Arts of Sucking Female's Vagina
आईमाईको पुती चाट्दा निम्न कुराहरु बिचार गरेमा आईमाई हरु असाध्यै उत्तेजनामा आउछन -
- जिब्रो नरम बनाएर हल्का सँग टिसिमा जिब्रोले खेलाइदिने ।
- एसरी जिब्रो खेलाउदा तल माथि र दाँया बाँया अनी सर्कल सबै तरिकाले गर्ने । जुन गर्दा आईमाई बढी कराउछ तेही तरिका बढी गर्ने ।
- बेला बेला मा पुती को प्वालमा पनि जिब्रो छिराइदिने ।
- कुनै कुनै आईमाईले पुती मा औंला ले खेलाउदै जिब्रो ले टिसी खेलाइदिएको मन पराउछन । तर कुनै केटीलाई पुतिमा औंला हाल्दा दुख्छ ।
एसरी जिब्रो केटी को मालमा खेलाउदा हात ले दुध माड्न चाँही बिर्सनु हुँदैन ।
- बेला बेलामा टिसी र पुतिमा मुख्ले खसी को हद्दी चुसे झै गरेर चुस्दिदा केटी मुर्छा हुन्छे ।
- केटी लाई डोग्गी पोजिसनमा राखेर पछाडि बाट पुती र टिसि मा जिब्रो ले खेलाउने चुस्ने गर्नु पर्छ ।
- ४, ५ दिन सम्म नचिकेको केटीलाई एसो गरिदियो भने चिक्नु अगाडि नै झार्छंन ।
Sex Liturature By Rajanish
चर्चित पुस्तक सम्भोगदेखि समाधिसम्मका लेखक ओशो रजनीशलाई पत्रकारले सोधे- तपाईं सेक्सगुरु हो ?’ रजनीशले भने- ‘यो संसार विक्षिप्त हो, म होइन । मेरो नामबाट ६ सय ५० कृति प्रकाशित छन्, बाँकी पुस्तकको किन कोही चर्चा गर्दैन ?’
यही पुस्तकका कारण यी रजनीशलाई ‘सेक्सगुरु’ उपाधि दिनु न्यायसंगत हो कि होइन, त्यसमा बहस गर्न सकिन्छ । यद्यपि, यो पुस्तक रजनीशको’ मास्टरपिस’ मान्ने गरिन्छ ।
यस कृतिमा रजनीशले तन्त्रले बताएका सम्भोग-पद्धतिहरूको विस्तृत व्याख्या गरेका छन् । उनी भन्छन्- ‘सम्भोग एक मिनेटमा टुंगियो भने मानिस फेरि सम्भोग गर्न आतुर हुन्छ । तीन मिनेटसम्म लम्बियो भने एक सातासम्म सम्भोगको याद पनि आउँदैन । सात मिनेटसम्म लम्बिएमा तीन महिनाका निम्ति सम्भोगको कल्पना पनि आउँदैन । यदि तीन घन्टासम्म लम्बियो भने जीवनभरका निम्ति तृप्ति हुन्छ ।‘
सामान्यतया सम्भोग हाम्रा निम्ति क्षणिक सुखानुभूति हो । यसलाई तीन घन्टा लम्ब्याउने कुरा अपत्यारिलो र केही अव्यावहारिक पनि लाग्छ । जे भए पनि रजनीशको तर्कअनुसार, तलका विधि अपनाएर सम्भोगलाई तीन घन्टा लम्ब्याउन सकिन्छ ।
पहिलो सूत्रः सम्भोगका बेला लामो र गहिरो श्वास लिने र क्रमशः श्वासलाई शिथिल पार्नुर्होस् । यति शिथिल कि मानौँ श्वास चलिराखेकै छैन । श्वास जति शिथिल हुन्छ, उति सम्भोगको अवधि विस्तार हुन्छ ।
दोस्रो सूत्रः सम्भोगको क्षणमा ध्यान दुवै आँखाको बीच अर्थात् आज्ञाचक्रमा केन्दि्रत गर्नुहोस् । यसरी ध्यान सम्भोगमा नभई अन्यत्र केन्दि्रत गर्दा पनि ‘ड्युरेसन‘ बढ्छ, आनन्दमा कमी आउँदैन ।
तेस्रो सूत्रः सम्भोग आरम्भ गर्दा आफूलाई मनपर्ने देवताको मन्दिरमा प्रवेश गर्दाको जस्तो पवित्र भावदशा धारण गर्नुहोस् । त्यसबखत हामी समयशून्य अस्तित्वसँग एकाकार हुने चरणमा हुन्छौँ । ठीक त्यही बेला हो, कुनै अदृश्य स्रष्टाले सृष्टि गर्ने, नयाँ जीवनलाई जन्म दिएर । यतिखेर हामी त्यो स्रष्टाको निकटतम् हुन्छौँ ।
समाधि अर्थात् समयशून्यताको स्थिति अनुभूति गर्न सम्भोग साधन हुन सक्दछ भन्ने रजनीशको तर्क हो । उनी भन्छन्- ‘मानिसको हृदयमा हुने सम्भोगप्रतिको आकर्षण, आतुरता वा व्यग्रता समाधिका निम्ति हो, समयशून्यताको अनुभूतिका निम्ति हो । जो व्यक्ति सम्भोगको सम्पूर्ण रहस्य जान्न समर्थ हुन्छ, उसका लागि सम्भोग व्यर्थप्रायः हुन्छ । ऊ सम्भोगलाई अतिक्रमण गरेर पार हुन्छ ।‘
यौनका सम्बन्धमा अनुदार पूर्वीय समाजमा सम्भोगलाई सहज रूपमा लिन सिकाउन रजनीशले ठूलै साहसिक पहल गरेका हुन् । यो पहलका लागि उनी बन्दनीय मानिन्छन् । यौनको खुलेआम प्रचार गरेर वा विवादास्पद जीवन बिताएर उनी जति दुष्प्रचारित भए पनि हामीले बुभmनैपर्ने एउटा मुख्य कुरा हो- मानिस सम्भोगबाट जन्मन्छ ।
मानिसको मनोविज्ञान सम्भोगको ऊर्जाद्वारा संरचित हुन्छ । उसको सम्पूर्ण अस्तित्व सम्भोगको ऊर्जाले भरिएको हुन्छ । जीवनको एउटा मुख्य ऊर्जा सम्भोगको ऊर्जा हो । यस कुरालाई आधुनिक मनोविज्ञानले पनि स्वीकारिसकेको छ । यो ऊर्जालाई भरपूर उपयोग किन नगर्ने ?
Porn | Nepali4porn